ခုံးကျော်တံတားများမှာ အများပြည်သူ အသုံးပြုရန် နေရာများ ဖန်တီးမှု ပြပွဲ ပြုလုပ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
နစေ့ဥျ အစီအစဥျ (မနကျပိုငျး)
နစေ့ဥျ အစီအစဥျ (ညနပေိုငျး)
နစေ့ဥျ အစီအစဥျ (နိုငျငံတကာ)
စီးပှားရေး စကားဝိုငျး (Business Talk)
မွနျမာ မြိုးဆကျသဈ (Next Gen Myanmar)
MCN QUESTION TIME
မွနျမာ့နိုငျငံရေး ရုပျသံ မှတျတမျး
MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ခုံးကျော်တံတားများမှာ အများပြည်သူ အသုံးပြုရန် နေရာများ ဖန်တီးမှု ပြပွဲ ပြုလုပ်
ခုံးကျော်တံတားများမှာ အများပြည်သူ အသုံးပြုရန် နေရာများ ဖန်တီးမှု ပြပွဲ ပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်းကနေဦးဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော် ခုံးကျော်တံတားများမှာ အများပြည်သူအသုံးပြုရန်နေရာများ ဖန်တီးမှုပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်းတံတားအောက်မှာ ဇန်နဝါရီ (၂၅) ရက် ဒီကနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲမှာ ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲကို Yangon Heritage Trust – ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ Association Of Myanmar Architects- မြန်မာနိုင်ငံဗိသုကာအသင်း-Institut Francais-ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနတို့က ပူးပေါင်းပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြပွဲမှာဆိုရင် တာမွေတံတား၊ မြေနီကုန်းတံတား၊ ရွှေဂုံတိုင်တံတား၊ လှည်းတန်းတံတား၊ ရှစ်မိုင်တံတားငါးစီးကို လှပတဲ့ဗိသုကာပညာများနဲ့ သရုဖော်ပြသထား ပါတယ်။
ဒီပြပွဲကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဝင်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ကြတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ငါးဖွဲ့ကို တစ်ဖွဲ့ ဆုကြေးငွေကျပ်ငွေ ငါးသိန်းစီကိုလည်း ဆုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
Previous articleလေးကြိမ်မြောက် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်
Next articleဘိန်းစိမ်း ၁၃ ကီလို တင်ဆောင်လာသူတွေကို ဖမ်းဆီးရမိ
နှဈစဉျ GDP ၂၀ % တိုးတကျအောငျ ဆောငျရှကျမယျလို့ ပွညျသူ့ရှဆေ့ောငျပါတီ (PPP) ပွောကွား
ခငျြးပွညျနယျရဲ့ လူမှုစီးပှား၊ ကနျြးမာရေးကအစ ယဉျကြေးမှုပါမကနျြ အမှနျတကယျဖှံ့ဖွိုးအောငျ (CNLD) ဆောငျရှကျမယျ
မွဈဆုံ စီမံကိနျး အပွီးတိုငျ ရပျဆိုငျးရေး ကခငျြပွညျနယျ ပွညျသူ့ပါတီ (KSPP) ဆောငျရှကျမညျ
ISMS & IDEOLOGIES (PART -5) | ဆိုဗီယကျယူနီယံ ပွိုကှဲမှုနှငျ့ အမြိုးသားရေးနာကငျြမှု သမိုငျးသငျခနျးစာ
ISMS & IDEOLOGIES
ISMS & IDEOLOGIES (PART -4) | ကားမာ့ချဈ၏ အယူဝါဒမြားနှငျ့ တပျမတျော
ISMS & IDEOLOGIES (PART -3) | ကားမာ့ချဈ၏ စဈမှနျသညျ့ အမြိုးသားရေးအယူဝါဒ
ISMS & IDEOLOGIES (PART -2) | လကျဝဲ-လကျယာ အယူအဆမြားအား နှိုငျးယှဉျလလေ့ာမှု
No. (527-529), Second Floor, Myint Myat Kyaw Building, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township, Yangon 11171 . +959 36084960
Contact us: newsroom.mcn@gmail.com